Nei tichida Magnesium?
Tisati tanyatsoongorora Magnesium L-Threonate nootropic supplement, ungangoda kunzwisisa nezve yakakosha yakatangira.
Magnesium chinhu chakakosha micronutrient, iyo iri kushingairira kubatanidzwa mune akati wandei maitiro emuviri. Iyo elementi inobata pamusoro pemhasuru contraction uye zororo, protein synthesis, uye neuronal mashandiro. Kunze kwezvo, inogadzirisa shuga yeropa uye inochengetedza BP.
Kunyangwe iwe uchikwanisa kutora Magnesium pasese, mazhinji eaya ekuwedzera anowedzeredzwa kana akasungwa neamino acids. Chelation inovandudza kutora, kugadzikana, uye bioavailability kwemaminerari.
Iko kusunganidzwa kweMagnesium kwakakwirira muuropi kupfuura mune chero imwe nhengo yemuviri. Inodzosera kukwegura kwehuropi nekusimudzira mapurasitiki uye synaptic density, zvinova zvinhu zvakakosha mukugadzirisa kugadzirisa. Kushayikwa kweMagnesium kunokonzera bipolar kusagadzikana, dementia, chirwere cheAlzheimer, kukuvara kwakanyanya kwehuropi, schizophrenia, kufenda, kushushikana, pakati pemamwe mamiriro.
Iko kurapa kushandiswa kweMagnesium mune yehutano hutano rave riri pfupa rekukakavara. Chikonzero ndechekuti ichi chicherwa hachimbokurumidza kuyambuka chipinga cheropa-chepfungwa. Nekudaro, iyo inokatyamadza kuwanikwa kwe Magnesium L-Threonate poda yakave mhinduro yekupedzisira kune ichi dambanemazwi.
Magnesium L-Threonate powder isanganiswa yeMagnesium uye L-Threonate mamorekuru. Chinhu chacho chinopetwa kaviri se nootropic uye neuroprotective drug.
Kuvapo kwayo kwakadzokera kumashure ku2010 apo Guosong Liu nevamwe vake vezveurouroscience paMassachusetts Institute of Technology vakawana chinowedzerwa chinowedzera chakasimudzira kuziva mumakonzo. Pamberi pekuwanikwa uku, vaongorori vakatadza kuziva nzira yekuisa magnesium muuropi sezvo chicherwa chakavharirwa padanho reropa-rehuropi.
Magnesium L-Threonate zvinowedzera zvinogadzirwa. Nekudaro, iri yakawanda bioavailable kupfuura chero imwe Magnesium remubatanidzwa. Kunze kwezvo, zvinokurumidza kuyambuka chipingaidzo cheropa-uropi, nekudaro, iyo yekupedzisira inotsiva kushomeka kweMagnesium muuropi. Iyo mukomboni inosimudzira iyo magnesium mazinga muuropi ne15%.
Magnesium L-Threonate mabhenefiti uropi nekusimudzira neuroplasticity. Kunze kwezvo, inoshandawo kuwedzera huropi-hwakatorwa neurotrophic zvinhu, izvo zvakakosha mukuumbwa kwemasero emitsipa.
Chii chinonzi Magnesium L-Threonate inoshandiswa?
Magnesium L-Threonate inobatsira mukugadzirisa kusagadzikana kwehuropi. Mushonga uyu unowedzera kuwanda kwema magnesium mumasero ehuropi.
Psychonauts anotenga Magnesium L-Threonate kune ayo nootropic mabhenefiti. Inosimudzira episodic ndangariro, kudzidza, uye kuwedzera kusimbisa. Iyo yekuwedzera idhizaini yekurapa kuvarwere vanorwara nezera-rakanangana nekurasikirwa ndangariro, ADHD, kuora mwoyo, uye chirwere cheAlzheimer.
Magnesium L-Threonate inobatsira se nootropics yekuwedzera
Kuvandudza Mabasa Ekuziva
Magnesium inoyambuka muropa-brain barriers nekuda kwechinhu cheTreonate. Iyi mamorekuru inokonzeresa kuwedzera kweiyo synaptic density uye neuronal kuendesa.
Kutora Magnesium L-Threonate inowedzera kushanda kwepfungwa, kuisa pfungwa, uye kushanda ndangariro. Zvinoenderana nekiriniki yakaburitswa kuyedzwa, avo vaidzidza vakatora ichi chekuwedzera vakaratidza kuvandudzwa kwepisodic memory, Executive function, uye kutarisisa.
Inodzosera Kukwegura Kwepfungwa
Uchishandisa Magnesium L-Threonate inodzosera zera rehuropi revakuru. Vatsvagiri vanosimbisa kuti mushonga unogona kuita kuti huropi huite semakore mapfumbamwe madiki.
Kukwegura kunoita kuti huropi hwema synapses huderere, zvichitungamira mukudzikira kwepfungwa. Nekudaro, Magnesium L-Threonate inowedzera basa nekudzivirira kurasikirwa kweaya ma synapses nekusimudzira neuroplasticity. Kunze kwezvo, inochengetedza huropi huwandu hwemagesium kusvika pamatanho akakwirira.
Magnesium L-Threonate ADHD inowedzera inoderedza kunetseka uye kunetseka mazinga. Mushonga unovhenekera manzwiro ako, zvichikusiya uine kujeka kwepfungwa. Inoshanda nekusimudzira iyo GABA maurotransmitter uye zvakare ichitadzisa iko kushanda kwekushushikana kwemakemikari.
Padanho reropa-rehuropi, Magnesium L-Threonate inowedzera bvisa mahormone ekudzvinyirira kuti asapinda muuropi.
Kunze kwezvo, zvinokutadzisa kubva kune dzinotyisa ndangariro, kutyisidzira chaiko, uye zvinoshungurudza zviitiko zvinounza kushushikana.
Kana iwe uri kusuruvara, unogona kutenga Magnesium L-Threonate yekugadzirisa kusarara kwako. Iyo yekuwedzera inodzora mhasuru nekusimudza calcium kubva kwavari. Inoderedzawo cortisol uye mamwe mahormone ekudzvinyirira, ayo anodzivisa melatonin uye kugona kurara.
Management yeNeurodegenerative Zvirwere
Iko kugona kweMagnesium L-Threonate ADHD mishonga pakurapa zvirwere zveeurodegenerative mabhengi pane iyo mamiriro ezvinhu aya anobatana kune yakaderera Magnesium mazinga. Neuroscientists vanobatanidza kushomeka kweMagnesium muuropi neADHD, dementia, uye Alzheimer's.
Zvakare, kutora Magnesium L-Threonate capsules kunodzivirira kudzikira kwepfungwa uye kurasikirwa kwendangariro, zvinova zvinokanganisa mutsinga zvinowanzoitika ku dementia kana Alzheimer's.
Maitiro ekutora Magnesium L-Threonate
Magnesium L-Threonate dosage mahinji pazvinhu zvishoma, zvinosanganisira bonde, zera, uye zvakashandiswa. Semuenzaniso, chinowanzoitika chevane makore makumi matatu kusvika makumi matatu vane makore anosvika 19mg nepo vanhukadzi vachizoshandisa anenge 30mg. Chero ani pamusoro pemakore makumi matatu nemasere anogona kukwidza huwandu ne400mg, kune vese vanhukadzi.
Paunenge uchitora Magnesium L-Threonate nootropic yekusimudzira cognition, iyo dose inogona kupfura inosvika ku1200mg pazuva. Kupesana, iyo huwandu inowira ku400mg kana uchishandisa Magnesium L-Threonate yekurara yekuwedzera kune yayo hypnotic zvivakwa.
Paunenge uchitora mukomboni iyi se dietary supplement, unogona kushandisa pakati pe1000mg ne2000mg pazuva. Zvirinani, iwe unofanirwa kupatsanura Magnesium L-Threonate capsules muzvikamu zviviri uye woitarisira mangwanani uye nguva pfupi usati warara.
Pane chero mhedzisiro here inotora Magnesium L-Threonate yekuwedzera?
Chaiwo Magnesium L-Threonate mhedzisiro inosanganisa misoro uye kukotsira. Kurara chikomborero pakuvanda, zvinoenderana nemamiriro ako ezvinhu. Semuenzaniso, kana iwe uchinetseka nekushaya hope, Magnesium L-Threonate yekurara mushonga ichakubatsira iwe kubata wink.
Iyi yekuwedzera inozogona zvakare kukanganisa kugona kweimwe mimwe mishonga. Iwe ungatofanira kubvunza chiremba wako kana uchitora mishonga inorwisa mabhakitiriya, yekuzorodza mhasuru, kuwonda kweropa, kana mishonga yeropa. Icho chikonzero ndechekuti magnesium inogona kudzora iyo pharmacodynamics.
Magnesium L-Threonate poda inoshandisa uye kushandiswa
Magnesium L-Threonate ndeye nootropic ine simba. Inosimudzira ndangariro kuumbwa, kudzidza, uye kutariswa. Nechikonzero ichi, iwo mushonga wekurapa wekutarisira mamiriro ehurodegenerative.
Magnesium L-Threonate kunetseka zvinodhaka kunodzosera mhanza yemurume. Iyo L-Threonate komputa inoderedza simba re dihydrotestosterone (DHT) hormone, iyo inokonzeresa kurasikirwa nevhudzi.
Uyezve, vanhu vane matambudziko ekurara vanogona kushandisa mushonga uyu kugadzirisa kurara. Kwete chete iyo inozorodza mhasuru asiwo inodzikamisa muviri apo kuderedza kushushikana uye kushushikana. Flick kuburikidza neMagnesium L-Threonate ongororo inosimbisa kuti vazhinji vashandisi vanozoona kukotsira nguva pfupi mushure mekupa iyo yekuwedzera.
Kwokutenga Magnesium L-Threonate poda yakasviba
Iwe unogona kunge wakanamatira neMagnesium L-Threonate kwekutenga gwara, uchifunga kuti kuwanikwa kweanopfuura-the-counter nootropics hazvisi pamutemo mumatunhu mazhinji. Zvakanaka, inguva yaunofunga kutenga iyo zvokuwedzera kubva kune anoshanda online zvitoro.
Isu takazvimiririra kugadzira zvigadzirwa zvedu zvese mumhando dzinodzorwa marabhoritari. Unogona kusevha yakawanda nekutenga magnesium L-Threonate poda muhuwandu.
Chii chakanakira Magnesium L-Threonate?
Magnesium L-Threonate mahwendefa anotsigira kugona kwekuziva uye kurangarira kwekuumbwa Kusiyana nezvimwe mhando dzemagnesium, ichi chinoumba chinogoneka kune iyo yeropa-brain barriers. Icho chiri neuroprotective nootropic.
Kunyanya zvakadaro, varwere vari kurwisana nezvirwere zveeurodegenerative vanogona kutenga Magnesium L-Threonate yekugadzirisa mamiriro avo.
Ndinofanira kutora rinhi Magnesium L-Threonate?
Iwe unofanirwa kutora ichi chinowedzera mangwanani uye usati warara. Imwe yeiyo Magnesium L-Threonate mhedzisiro yacho dzungu. Nekudaro, zvakakosha kuti iwe uzvitungamirire usiku.
Ndeupi rudzi rweMagnesium rwakanyanya?
Kune anopfuura mashanu marudzi e Magnesium inowedzera, iyo inoshanda zvakasiyana. Naizvozvo, zvaunofarira zvinofanirwa kutsamira pane chero muviri maitiro aunoda kubata. Tora, semuenzaniso, Magnesium L-Threonate ndiyo sarudzo yekupedzisira kune chero munhu ari mushure mekusimudzira kugona nekusimudzira mashandiro ehuropi hwavo.
Kusiyana nevamwe vayo, Magnesium L-Threonate kunetseka zvinodhaka zvine bioavailability yakakwira pamwe nekuyambuka iyo yeropa-huropi chipingamupinyi.
Iko Magnesium L-Threonate yakanaka kune kushushikana?
Kutora Magnesium L-Threonate mapiritsi anogona kurerutsa mamoods ako, kudzikisira kushushikana, uye kubvisa kushushikana. Iyo inogadzikana mhedzisiro inoita kuti ive yakanaka anxiolytic zvinodhaka.
Iko Magnesium L-Threonate yakanaka kune BP?
Magnesium L-Threonate inogona kuita se calcium chiteshi blocker. Mushonga uyu unodzikisa zvakanyanya kuwedzera kweropa nekusvika 5.6 / 2.8mm Hg. Zvidzidzo zvinotsigira kuti zvinodzivirira hutano hwemwoyo hunosanganisira ischemic sitiroko, hypertension, coronary moyo mamiriro, uye cardiac arrhythmias.
Iko kuwanda kweMagnesium L-Threonate muyero ndeyekuti iwe unogona kuitisa pamwe neakawanda antihypertensive zvinodhaka.
Inguva yakareba sei iyo Magnesium L-Threonate inotora kushanda?
Magnesium L-Threonate mabhenefiti anozove anoonekwa mushure memwedzi, kunyanya kana iwe uri kubhengi pane yekuwedzera yekuziva. Zvinoda angangoita mavhiki mana kuti ikwidziridze huwandu hwemagesium muuropi, inoenderana nekuumbwa kwendangariro.
Kana iwe uri kurapa kushaya hope, iyo yekuwedzera inozoshanda kanenge pakarepo. Nezve kushushikana, kushushikana, uye kunetsekana nekushungurudzika kwepashure, Magnesium L-Threonate ongororo inosimbisa kuti mhedzisiro yacho inoonekwa muvhiki.
Shen, Y., et al. (2019). Kurapa kweMagnesium-L-Threonate Inosimudzira iyo Magnesium Level muCerebrospinal Fluid uye Inogonesa Kukanganisa kweMotokari uye Dopamine Neuron Kurasikirwa mune Mouse Muenzaniso weHosha yaPasinson. Neuropsychiatric Disease uye Treatment.
Slutsky, ini, et al. (2010). Kuvandudza Kudzidza uye Ndangariro nekusimudza Brain Magnesium. Vhoriyamu 65, Chinyorwa 2, p143-290.
Zvinonzwisisika, AG, et al. (2013). Chisingaperi Chikafu Magnesium-L-Threonate Inomhanyisa Kupera uye Inoderedza Kuzvidzora Yekudzoka kweAkagadziriswa Mamiriro Ekusveta. Pharmacology, Biochemistry, uye Maitiro, Vhoriyamu 6, p16-26.
Wei, Li et al. (2014). Kukwidziridzwa kweBongo Magnesium Inodzivirira Kurasikirwa kweSynaptic uye Kunodzosera Kukanganisa Kwekuziva muAlzheimer's Disease Mouse Model. Molecular Brain.
Zarate, Carlos et al. (2013). Mapara Paradigms eKurapa-Kurwisa Kushungurudzika. Annals weNew York Academy of Sciences.
Wroolie, TE, uye al. (2017). Yakavhurika-Label Kuyedzwa kweMagnesium L-Threonate mune Varwere vane Dementia. Kugadziridza Mukukwegura, Vhoriyamu 1.
1. Nei tichida Magnesium?
2. Chii chinonzi Magnesium L-Threonate?
3. Chii chinonzi Magnesium L-Threonate inoshandiswa?
4.Magnesium L-Threonate inobatsira se nootropics yekuwedzera
5.Mabatiro aungaita Magnesium L-Threonate
6.Kune chero mhedzisiro here inotora Magnesium L-Threonate yekuwedzera?
7.Magnesium L-Threonate poda inoshandisa nekushandisa
8.Kupi kwekutenga Magnesium L-Threonate poda yakasviba